एकैचोटी ८ रुपैयाँ घटाइयो पेट्रोलको मूल्य, आजै रातिदेखि लागू हुने ! - Nepalese Times
एकैचोटी ८ रुपैयाँ घटाइयो पेट्रोलको मूल्य, आजै रातिदेखि लागू हुने !
नेप्लिज संवाददाता १५ मंसिर २०७८, बुधबार १३:१४ (1 महिना अघि) १३४७ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चपेटामा विभिन्न देशका सर्वसाधारण गर्छन् । नेपालमा पनि पछिल्ला केही समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ ।
मूल्यवृद्धिको कुनै भौगोलिक सीमा देखिँदैन तर कतिपय सरकारहरूले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लागू गर्छन् । भारतको नयाँदिल्ली प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ भ्याट घटाएको छ ।
सरकारले लिने भ्याट (कर) घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष सुविधा जनतालाई पर्नेछ । भ्याट बढी हुँदा जनताले पेट्रोलको मूल्य बढी तिर्नुपर्थ्यो ।
दिल्ली सरकारले पेट्रोलमा लाग्ने भ्याटलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर १९.४ प्रतिशतमा झारेको छ । बुधवार रातिदेखि नै घटेको मूल्य लागू हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बुधवार बसेको दिल्ली सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ रुपैयाँ प्रतिलिटर भ्याट छुट गर्ने निर्णय गरेसँगै मूल्य घटेको छ । यस वर्ष शुरूदेखि नै पेट्रोलको मूल्य लगातार बढिरहँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेपछि दिल्ली सरकारले राहतका लागि भ्याट छुटको निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच, कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रभावित भएको छ । अमेरिकी बेन्चमार्क डब्लूटीआइ कच्चा तेल प्रति ब्यारेल ७० डलरभन्खा तल झरेको छ। योसँगै ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य पनि घटेको छ ।
गत हप्ता मात्र प्रतिब्यारेल १० डलर घटेको थियो । करिब एक हप्ताअघि प्रतिब्यारेल ८२ डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य ७२ डलरमा झरेको छ ।